Volana JONA – MyDago.com aime Madagascar
Ankizy, teny Gasy, fetin-Gidragidra
Rehefa nivoaka sempotra nandritra ny fahamaizan’ny volana may, dia tonga indray ity ny volana Jona toa hanjaonjaona amin’ny tsy antony. Volana natokana ho an’ny ankizy, ho an’ny teny Gasy, ary indrindra koa hisy ny fetim-pirenen’ny olom-pirenena tia sakoroka sy gidra. Fa mbola misy ankizy tokony hanokanana iray volana ve eto ? Mbola misy teny Gasy tokony hajaina sy ho lolohavina an-tampon’ny loha ? Ary inoana koa ve fa hisy fety hankalazana ampitoniana ny niverenan’ny fahaleovantena ?
Ankizy tsy milamin-tsaina sy lazoin’ny aretina, miampy ny tsy fahampian-tsakafo, ary zara raha mianatra sy tonga any an-tsekoly no mba ankizintsika. Tsy misy politikam-pirenena hijerena ny ankizy izany teto hatramin’izay e ! Efa nihoatra ny 11 taona ity ny taona 2000, ary efa eo an-tendron’ny fitantanana ny firenena ny ankizin’ny taona valopolo. Fa efa mba nirehareha amin’ny fananany an’izany « mpitarika » izany ve ny ankamaroan’ny olom-pirenentsika ? Mba firy amin’ny ankizintsika no mba te-ho Rajoelina, na koa te-ho Ravalomanana, na ho Ratsiraka, na te-hadimby an’i Zafy ? Misy te haka tahaka ve ry Rajaonarivelo, ry Ramaroson, ry Rakoto Andrianirina, ry Tsarahame, na koa ry Jao Jean, na ry Ratsirahonana?…f’angaha moa vaoavao amin’ny sofintsika ny hoe : Leo politka ?
Teny Gasy toy ny inona koa no mba hifaneraserantsika eto ? Ny teo aloha tsy mahay sy tsy mahafehy izany, isika tato afara dia manara-davahana sy tsy vonona ny hijery ny biloka tokony hahitsy. Efa mba nisy politikan’ny fampiasana ity tenin-drazana ity ve teto ? Ireny nataon’ny repoblika faharoa ireny ve no tena fanagasiana notakian’ny Gasy ? Iza no sahy hilaza ankehitriny fa teny tena ifanarahan’ny fampihavanana sy ny fampiraisana ny Gasy ny tenin-drazantsika ? Tsy manavao ny sofina intsony anie ny nandre fa misy Gasy ray Gasy reny amin’izao fotoana, saingy tsy te- ho Gasy intsony e !
Satria nopotehina, naronjona ho amin’ny fifankahalana, nopempoina, nafokaina…
Fetim-pirenena faha-51 izao no hambolena gidragidra eto indray, satria mpitarika politika mpifikitra amin’ny heviny avy no mifanabaty sy mifanasa vangy. Tsy mahavita mampitambatra ny ampahany betsaka amin’ny olom-pirenena ny fetin’ny fiverenan’ny fahaleovantena. Hiverina indray angamba ny Dihy Jinja (DJ) hibahanana ny arabe sy ny elekelan-trano ? Oay ireto isika e ! Sady tsy mahay no tsy menatra.
Volana 18 izay ?
Volana imaso tsy mba kilema !
Auteur Ony RambeloPublié le 9 juin 2011 8 juin 2011 Catégories Malagasy, Politique, Société
1 pensée sur “Volana JONA”
9 juin 2011 à 16 h 15 min
FA IZA NO TENA NANDEFITRA E?
1) NY OLONA NAKA NY FAHEFANA T@ HERY, SA
2) NY OLONA HAFA?
IRETO (1)AMIKO TSY AFAKA HILAZA FA NANDEFITRA. NY « FAHEFANA » ANANANY AZA TSY ARA-DALANA KA INONA NO HOE NANDEFITRA?
Précédent Article précédent : Après Gaborone ce sera Sandton!
Suivant Article suivant : Hivereno ny Tantara !